Samee Video ah oo la Sawiro & Music Isticmaalka Kan sameeyey Video Muqaal
Ma doonaysaa in aad video u gaar ah laakiin aan haysan fiidiyo ah? Ha welwelina, weli waxaad ka dhigi kartaa videos weyn isticmaalaya weli photos, iyo sawiro iyadoo la kaashanayo kala duwan dejiyeyaasha video slideshow ee lagu iibiyo suuqa. Lacala haddii aadan garan aad taas oo ka mid ah in la doorto, halkan video weyn slideshow makers- Video Editor , Fantashow iyo DVD Slideshow Builder Deluxe - waxaa lagu talinayaa. All oo ka mid ah aad u wadaagaan daqiiqado xusuus nolosha ee hab cusub oo aan la ilaawi karin. Akhri si aad u doorato kii xaq video slideshow sida ay baahidaada:
Video Muqaal Kan sameeyey, 1: Video Editor (Si fudud loo abuuro iyo edit video kuu gaar ah slideshow)
Video Muqaal Kan sameeyey 2: DVD Muqaal dhise (All-in-mid slideshow gaare video)
Video Muqaal Kan sameeyey 3: Fantashow (bixiyaan arrimo slideshow kala duwan si aad u doorato)
Video Muqaal Kan sameeyey, 1: Video Editor
Hel gaare ah video slideshow smart in wax ka bedel iyo abuuri karto video u gaar ah.
La shaqee qaabab image caanka ah sida jpeg, PNG, BMP, GIF iyo in ka badan.
Si fudud noola, jar, jaray ama la isu geeyo aad slideshow ama ganaax-habayn goobaha.
Shakhsiyeeyo video slideshow la kala guurka cajiib ah, Intro / credits, iyo codad.
Codso saamaynta video badan oo horumarsan sida Muuse, Face Off, Jump gooyaa oo dheeraad ah.
Save duubey video for qalab kasta, iyaga gubi in DVD ama iyaga geliyaan online.
Maxaad Dooro Video Editor
Tani gaare video slideshow qoreysa kii saaxir ah smart oo u suurta galinaya in aad si fudud ku dari sawiro iyo videos aad, geliso soundtrack ah - oo aad slideshow diyaar u yahay!
Rich Muqaal Raadka
Pan & zoom, warejin iyo saamaynta midabka farshaxanka nolosha ku soo dejin doonaa sawirada weli aad. Saamaynta More sare sida PIP, Face Off, Jump Goo, iwm sugayaan in aad si ay u sahamiyaan.
Handy Tools Video ayeey
Si fudud isku shaandheyn photos, kor loogu qaado nuur iyo dheelitirka midabka hufay aad video slideshow. Sii slideshow aragti dheeraad ah oo ay ku daray music aad ugu jeceshahay.
Video Share Siyaabo kala duwan
badbaadi aad slideshow qaabab kala duwan, ka soo xusho presets diyaar-dhigay, waayo, dhammaan qalabka gacanta loogu jecel yahay, waxa ay geliyaan si ay u Facebook iyo YouTube ama ku gubi ururinta DVD ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Video Editor >>
Video Muqaal Kan sameeyey 2: DVD Muqaal dhise
Hel slideshow gaare ah video oo dhan-in-ka mid ah in ay isku xiraan aad video, sawirka iyo muusikada.
Ku dar photos aan xad lahayn, videos iyo music si ay u abuuraan video kuu gaar ah slideshow.
Standard oo Advanced Hababka ku siinayaa si buuxda uga taliso goobaha slideshow.
480 Hababka movie weli jirsado sawirada galay xiiso slideshow video in daqiiqo.
Waxaa la dhisay-in qalabka tafatirka kuu ogolaanaysaa inaad kor loogu qaado image ku haboon.
Keydso slideshow qaabab kala duwan, gubi in DVD la bedeley DVD fiican ama share on YouTube.
Maxaad Dooro DVD Muqaal dhise
Iyada oo ay taasi slideshow gaare video, video samaynta ka photos waa wax fudud oo xiiso leh: dooran sawiro aad, la abuuro arc sheeko aad, xulo music, ku dar horyaal eegayey kuu gaar ah iyo dhoofinta!
Noocyo kala duwan oo Dulucda Custom
Kiinteistö arrimo slideshow ah ee munaasabad kasta oo la mid ah aroos, ilmaha, qoyska, fasaxa, iwm waxaa la siiyaa in this slideshow gaare video inuu ka soo leexdo aad sawiro & videos in ay il-qabad videos.
Saamaynta cajiib ah
mooshin cajiib ah iyo saamaynta farshaxanka, qoraalka slide midabo iyo clips horyaalka, kala guurka laga cabsado oo Intro / credits - kuwan oo dhan ka dhigi doonaa video slideshow more dhaceen.
Kala duwan dhoofinta Options
dhoofinta duubey in qaabab video caan ah, iyaga badalo u iPad, iPod, iPhone, PSP, telefoonada kale smart iyo Qalabka telefoonada gacanta, si toos ah u geliyaan in YouTube ama gubi in DVD.
Baro wax badan oo ku saabsan DVD Muqaal dhise >>
Video Muqaal Kan sameeyey 3: Fantashow
Hel ah kii sameeyey filim Sixir jeedi photos, video & music galay filimada xusuus by codsanaya boqolaal video Hababka.
Waxay bixisaa boqolaal arrimo slideshow la yaab leh.
Si fudud daro sida guurka, music iyo qoraallada si loo kobciyo aad video slideshow.
Taageer video qeexitaanka sare, oo ay ku jiraan 720p iyo 1080p.
Si toos ah geliyaan aad video gal YouTube ama ku gubi galay koobi DVD.
Maxaad Dooro Fantashow
Easy iyo Fantastic
Fantashow ka dhigaysa mid u fudud in la meld photos, music, saamaynta iyo ka badan galay Metamorphosis filim. Hadda dooran oo style, ku dar sawiro ama videos aad iyo ha software samayn inta kale ee aad u.
Kartuun Video arrimo
sixir dhabta Fantashow waa ay soo diyaariyeen midabo ah oo firfircoon, dhaceen arrimo video slideshow in aynu aad u muuqan bandhigo xusuus aad u qaali ah sida arooska, safarka, qalin iyo in ka badan.
Ku kab Story
Iyadoo set buuxda oo qalab tafatirka dhisay-in, u sheeg sheeko u gaar ah iyo caddayn saaxiibadaa iyo qoyskaaga! Kala guurka, filtarrada, qoraalka saamaynta cajiib ah heerka ku xiga idinka qaadan doonaa video.
Share Your Video si Adduunka
Guba aad video slideshow in DVD ama badbaadin in video saxda ah oo ku haboon qalabka aad iPhone, iPad ama iPod ama mobile kale, xataa si toos ah u geliyaan oo qaybsada on YouTube ama Facebook.
Baro wax badan oo ku saabsan Fantashow >>
> Resource > Video > dooro Kan sameeyey Xaqa Video Muqaal: Photos ka dhig Video